Ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI oo deeq gaadhsiiyay Gobolka Siti. - Cakaara News
Ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI oo deeq gaadhsiiyay Gobolka Siti.
Hadhagaale (CN) sabti, November, 28,2015, Ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI oo ah ciidan shacab ayaa makii ay si mug leh ugu guulaysteen hirgalinta nabadgalyo buuxda waxay hadda ku hawlan yihiin ka qaybgalka hirgalinta hawlaha horumarka iyo ka jawaabida baahiyaha shacabka DDSI.
Haddaba waxay ciidanka gaarka ah ee liyuu booliska DDSI deeq raashin ah oo iskugu jirta bariis iyo sonkor gaadh-siiyeen degmada hadhagaale oo gobolka siti deeqdaasi oo ay ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI ay ka soo jareen mushaarkooda askari ilaa musuul sare waxayna ugu talagaleen in ay ku caawiyaan shacabka ay abaarta roob la’aantu keentay saamaysay.
waxaa deeqtaasi gaadhsiiyay degmada hadhagaale ee gobolka siti masuuliyiinta ciidan booliska gaarka ah ee DDSI oo uu hogaaminayay taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI mudane general cabdirahmaan cabdilaahi buraale oo ay ku hewelinayeen masuuliyiin ka socoday gobolka siti oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka siti mudane cabdiwali maxamed.
Waxaana madashii loogu qaybinayay deeqdan raashinka shacabka ku dhaqan qabalaha xaarisa ee degmada hadhagaale kula hadlay bulshada la gaadhsiiyay caawinta taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ah DDSI mudan general Cabdiraxmaan Cabdulaahi Buraale. wuxuuna sheegay in ay ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI yihiin ciidan shacab oo ka dam-qanaya dhibta soo gaadha shacabka DDSI gaar ahaan tan hadda ay sobobtay abaarta roob la aantu keentay isaga oo tilmaamay taliyaha guud in ay deeqdan ciidanka booliska gaarka ah ka soo jareen mushaarkooda taasi ay tahay ayuu yidhi waajibaadka naga saarayan shacabka wuxuuna sheegay in ay caawinta sii wadayaan si looga samata bixiyo shacabka abaartu saamaysay
Dhankooda shacabka deeqdan raashinka ah la gaadhsiiyay oo ka hadlayay madashaasi ayaa siwayn ugu mahad celiyay soona dhaweeyay ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI sida wadaniyada iyo damiirnimada leh ee ay iskaga soo xilsaareen in ay deeqdan ay ka soo jareen mushaar kooda soo gaadhsiiyaan waxayna hoosta ka xariiqeen in ay yihiin ciidan siwayn ugu dam-qanaya shacabka ay abaartu samaysay.
Isku soo wada duub oo maaha markii ugu horaysay ee ay ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI ay shacabka deegaanka gaadhsiiyaan deeqo raashin ah tan iyo intii ay si dhab ah u hirgaliyeen xasilinta amniga deegaanka waxa ay u jahaysteen in ay ka qaybqaataan hirgalinta qorshayaasha kale oo dhinaca horumarka